နွား မှာလည်း အသဲနဲ့ပါ(သို့ ) ချစ်ခြင်းကိုမတားပါနဲ့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » နွား မှာလည်း အသဲနဲ့ပါ(သို့ ) ချစ်ခြင်းကိုမတားပါနဲ့
နွား မှာလည်း အသဲနဲ့ပါ(သို့ ) ချစ်ခြင်းကိုမတားပါနဲ့
Posted by ရာမည on Mar 31, 2013 in Creative Writing | 17 comments
ရှိပါစေလေ..။ ထားရာနေ စေရာသွားရသူဆိုတော့ လည်း ဒီဘဝဒီမျှဘဲပေါ့။
ပြောပြလို့ လည်းမရနိုင်ပြီမို့ လို သခင်စီမံရာအလိုလိုက်ပြီး ကိုယ့်ထိုက်ကိုယ့်ကံပါပဲ ….။
မျက်ရည်တွေလည်းခမ်းခဲ့ ပြီ ။ ဆုတောင်းတိုင်းသာပြည့်မည်ဆိုပါလျှင် မနက်ဖြန်ဆိုတာ…
ဆယ်သက် ဆယ်ကမ္ဘာ အဝေကြီးမှာ ရောက်မလာပါစေနဲ့  … လို့ ။
မိညို နက်ကျောနှင့်ဂျိုပိန်တို့ သည် ဆွေမျိုးတော်သည် မတော်သည်မသိ ။ ငယ်စဉ်ကပင် အတူကြီးပြင်း
လာသူများပင်ဖြစ်သည် ။ မှတ်မိသမျှပြန်တွေးရလျှင် မြက်ခင်းစိမ်းစိမ်းကြီးများဖြင့် မျက်စိတဆုံး ကျယ်ပြော
လှသော စားကျက်ကွင်းများတွင် တနေကုန် နေခဲ့ရသည်။ နေဝင်ချိန်ရောက်လျှင် လက်ခေါက်မှုတ်သံ
ကြားရတတ်သည် ။ဒါဆို အိမ်ပြန်ချိန်ရောက်လေပြီပေါ့။ တနေကုန်ဆော့ရင်း မြက်နုများစားခဲ့ပြီမို့ 
ညနေစာသည် ကောရိုးရေစိမ်အနည်းငယ်လောက်ဖြင့်သာ ပြီးလေသည် ။
ဂျိုပိန်နှင့် နက်ကျော တိုနှစ်ကောင်အနက် နက်ကျောသည်မိညိုကို ပိုလို့ ပင်ဂရုစိုက်သည် ။
မြက်နုစိမ်းလေးများတွေ့လျှင် မိညိုအတွက်နေရာဦးပေးထားတတ်သည် ။ ရေသောက်ပြန်လျှင်လည်း
ရေကြည် ရေနောက်ကြည့်ပေတတ်သည် ။ ညနေစာ စားကျင်းထဲတွင် ကောက်ရိုးစများမာနေလျှင်လည်း
သူအရင်ဝါးပြီးပြန်အန်ပေးတတ်ပြန်လေသည် ။ ထို့ကြောင့် မိညိုသည် နက်ကျောကိုသံယောဇဉ်ပိုမိသည်မှာ
မဆန်း။ဂျိုပိန် နှင့် ကားသာမန်ဆော့ဖေါ်ဆော့ဖက် ။ ဂျိုပိန်ကလည်း မိညိုကိုအထူးဂရုမစိုက်။ တစ်ခြံထဲနေ
အတူသွား အတူလာဖြင့် အမြဲမခွဲနေခဲ့သူတွေမို့အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ သံယောဇဉ်တို့ ဆန်းသစ်
လာသည် ။ အရွယ်လည်းရောက်ကြပြီလေ ။ နက်ကျောနှင့် ဂျိုပိန်တို့ ပင်လှည်းအငှားလိုက်နိုင်နေကြပြီ ။
ဒီနှစ်ပိုင်း သိသိသာသာထွားကျိုင်းလာသောနက်ကျောသည် နွားပေါက်ကြီးတစ်ကောင်အလားခန့် ထည်
နေသည် ။ တစ်ကိုယ်လုံးအဖြူတွင်မှ ကျောရိုးတစ်လျောက်အနက်စင်းကြီးနှင့်ဖြစ်သဖြင့် နက်ကျော ဟု
အမည်တွင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် ။ငယ်စဉ်ကမသိသာသော်လည်း အရွယ်ရောက်ချိန်၌ နက်ကျောတစ်ကောင်မှာ
နွာရှင်တိုင်း မျက်စိကျစရာဖြစ်လာသည် ။ ချောသည် ။ခန့် သည် ။အားကောင်းမောင်းသန် သွက်လက်၍
အလိုက်သိတတ်သည် ။ ပို၍ထူးသည်ကား ရွှန်းလဲ့တောက်ပသော မျက်ဝန်းညို ကြီးများပင်ဖြစ်သည်။
နက်ကျော၏ မျက်ဝန်းနက်နက် ပြုစားချက်သည် ရွာထဲကနွားမဒန်းမလေး များအဖို့ တစ်ချက်ဆို
ဆိုသလောက် ရင်ဖိုခဲ့ရသည်။ မိညို မှာသဝန်တိုခြင်းနှင့်အတူ အမျိုးအမည်မသိသော ဝေဒနာတို့ ခံစား
ရပြန်သည် ။ နှစ်ကောင်လုံး သတိမထားမိသော်လည်း သံယောဇဉ်မြစ်တစ်စင်းသည် ချစ်ခြင်းသို့ ခရီး
ဆက်မိလေပြီ ။ ညနေ ညနေ နက်ကျောအပြန်ကို မိညိုမျှော်နေတတ်ပြီ ။ နေ့ ခင်းက စားကျင်းထဲလာထည့်
ပေးထားသည့် ပဲဖတ် နှမ်းဖတ်လေးများကိုလည်း နက်ကျောအပြန်စားဖို့ ချန်ထားတတ်သည် ။
ဤသို့ နှယ် အပြစ်ကင်းသည့် ချစ်ခြင်းတို့ သည် ရာသက်ပန်မြဲလေမည် ဟု မိညိုမှတ်ထင်ထားမိသည် ။
အခုတော့ …..ဤသို့ ဤနှယ် ဖြစ်လာမည်ဟု နည်းနည်းမှ မမျှော်လင့်ခဲ့ပါ ။
မိညို ရင်ကွဲ ရလေပြီ ။ထို့ အတူ နက်ကျောသည်လည်း ……..
ဒီသတင်းကို နေ့ လည်ကကြားခဲ့ရသည့် မိညိုမှာ နှစ်နှစ်ချိုက်ချိုက် အိပ်ပျော်နေသော
နက်ကျောကိုကြည့် ၍ မျက်ရည်မဆည်နိုင်အောင်ဖြစ်နေမိသည် ။မနက်ကျလျှင် မြို့ ကဆရာဝန်လာမည် ။
ပြီးနောက် နက်ကျောနှင့် ဂျိုပိန်တို့ ကို သင်းကွတ် ပါလိမ့်မည် ။ အကြောင်းပြချက်ကား ပို၍သန်မာပြီး
လုပ်ငန်းခွင်တွင် ထိထိရောက်ရောက် အသုံးဝင်ရန်ဖြစ်သည် ။ သခင့်အတွက်ပေးဆပ်ရသည်မှာ
နွား ၏တာဝန်ဖြစ်သဖြင့် အပြစ်တော့ မဆိုရက် ။ သို့ သော် နွား မှာလည်း အသဲနဲ့ပါ လို့ တော့ 
ပြောချင်မိသည်။ မိညိုကရော ……
မျိုးဆက်တာဝန်အတွက် ရွာတောင်ပိုင်းမှ နွားသိုးကြီးမိုးထိနှင့် နောက်သုံးရက်မြောက်တွင် အိမ်ထောင်ချပေး
ဝေးရတော့ မယ် နက်ကျောရေ …… နင့်သွေးနင့်သား နင့်ကလေးတွေကို ငါလွယ်ချင်ပေမယ့် နင်ကခိုင်းနွား တဲ့
ခိုင်းနွား ဆိုတာနဲ့ပဲ အချစ်တစ်ခု ဘဝတစ်ခုလုံးကို စတေးလေရော့ သလား ?????
ငါက မျိုးဆက်တာဝန် အဟာရအတွက် နို့ ထုတ်ပေးရမယ့်တာဝန် …. ဒီတာဝန်တွေကြောင့် နှလုံးသားကိုစတေး
ချစ်ရသူနဲ့ ဝေးရမှာ တဲ့လား နက်ကျောရယ် …….. နင်ဘယ်လောက်နာမလည်းဆိုတာမတွေးရဲဘူး
ဒီလိုပဲ … ငါလည်း နွားမမြင်ရင် နဖားကြိုးပြတ်အောင်ရုန်းတဲ့ နွားသိုးမိုးထိပြုသမျှ နုရဦးမှာဘဲလေ……
ငါမငိုတော့ ဘူး နက်ကျောရေ ……… နင်လည်း မငိုနဲ့  ……ငါတို့ ဟာ အလှပြနေတာမဟုတ်ဘူး
ဘဝ တွေအတွက် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ခိုင်းနွားတွေ …. ရှိပါစေလေ ပြီးပါစေပေါ့ ဒီဘဝအတွက်တော့ 
သခင့်အလိုကျ ပေးဆပ်ရမှာပေါ့ နက်ကျောရေ ……..
ဝတ္ထု တစ်ပုဒ် အဖြစ်နဲ့ သာ …….
တိုက်ဆိုင်မှု ရှိလျှင် ခွင့်လွှတ်ပါ
ငါ့သားကြီးကို.. ဒီတခါအလှူပွဲအတွက်.. သေချာပြင်ပြီး.. လှည်းဆွဲခိုင်းရမယ်..
ဟဲ့ကောင်.. ရွှမ်း.. ရွှမ်း..ရွှမ်း.. ရွှမ်း..
“ယမထာ ရွှေကြိမ်လုံးရယ်နဲ့ … ထွန်တုံးကိုတဲ့ ခြေတော်တင် … နွားကြန်စုံနှင်…။
အားအန်ကုန် သိပ်ကွာမဝေးဖို့ကြွားမာန်ဟုန် ထိပ်ကြားကလေးရယ်နဲ့နွားကြန်စုံ ပိဿာပေးတို့ ကို မိုးမော့က နှေးမှာကြောင့် ကြိုးလျှော့လို့ပေး (ဦးရာကျော်) ။
ရွှေစာရံပွဲကိုတဲ့ သွားရအောင် နွားကြန်စုံ ခြူတွေဆွဲ၊ လှည်းကခဲ့မောင် …။ စေတီမြတ်ထွဋ်ခေါင်၊ ရွှေတောင်သို့ …။
ရွှမ်း.. ရွှမ်း..ရွှမ်း.. ရွှမ်း..
မိသားစုဝင်လိုချစ်… ချစ်.. ချစ်ပါတယ်..။
Thakhin CJ ဆိုတာ3star4star ကိုခေါ်တာလားခင်ဗျား…ကျွန်တော်နေမင်းရဲ့ပို့စ်ကိုဖတ်မရလို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ
သာမန်အားဖြင့်.. Thakhin CJ ဆိုတာ.. ရွာသူားတွေကိုခေါ်တာပါ..။
ရွာသူားတွေဖတ်မရရင်.. ဖတ်မရအောင်.. ပိတ်ထားတဲ့ပို့စ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်..။
သူကြီး မှ လာမန့် ပါ့မလားလို့ စိတ်ပူ နေတာရယ် . . . . .
ဟယ်။ နွား ဒရာမာ ပါလား။
မဖတ်ဖူးတော့ ဘယ်လို ခံစားရမယ်မသိ။
ဟာ… i7 Processor နဲ့ Windows 3.0 ကြီး run နေပါလား။ သိဘူးဗျာ တို့က ရဘူးထင်နေတာ။
ဒါပေမယ့် i7ကြီး နှမြောစရာနော် Windows7or 8 ပြောင်းတင်လိုက်ပါကွယ်။
တိုက်ဆိုင်မှုမဟုတ်ပဲ…တည့်တည့်ပြောလည်း…ခွင့်လွှတ်ပါတယ်ဗျာ..စုံထောက် ဇာတ်လမ်း စာရေးဆရာကြီးရယ်။ အကယ်၍ ကျွန်တော် မန့်ထားတာတွေ မရှင်းရင် တည့်တည့်မေးပေါ့ဗျာ။
ဒီရက်မှာ နွားသား (အမဲသား) စားခြင်းအကြောင်း ပွဲကျနေတုန်း သတင်းလေးတစ်ခု ပါ။
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂လ လောက်ကစပြီး ယူကေမှာ ရော၊ ဥရောပနိုင်ငံ အများစုမှာပါ အမဲသားနဲ့ လုပ်တဲ့ အမဲသား အမည်တပ် အစာတွေမှာ အမဲသားအစား မြင်းသားတွေ ဖြစ်နေပါတယ်။
ယူကေ ကို သွင်းတဲ့ အမဲသားတွေက ဥရောပနိုင်ငံတွေကပါ။
အစိုးရကတော့ မြင်းသားဖြစ်တာကလွဲ လို့ ဘာအန္တရာယ်မှ မရှိပါဘူး လို့ ပြောပေမဲ့ အဲဒီ Brand တွေကို လူတွေ မစားကြတော့ဘူး။
အန္တရာယ်မရှိဆိုပေမဲ့ မြင်းဆိုတာ စီးဖို့၊ပစ္စည်းဆွဲဖို့ သုံးတာမို့ တစ်ချို့လူတွေ (အများစု လဲဖြစ်မှာပါ) က အဲဒီမြင်းတွေကို အကိုက်အခဲ အနာ သက်သာစေတဲ့ ဆေးတွေ ကျွေးတာမို့ အဲဒီ အသားစားမိရင် သွယ်ဝိုက်အန္တရာယ် ရှိနိုင်တာပါဘဲ။
အမှန်ကတော့ ရောင်းသူတွေက ဒီလို လိမ်ပြီးလူလည်ကျဖို့တော့ မကောင်းပါဘူး။
ဒီမှာက အစားတိုင်းမှာ ဘာတွေ က ဘယ်လောက် % ပါတယ် ဆိုတာပြောရတာမို့ ညာရောင်းတာပါဘဲ။
စူပါမာ့ကက်တွေ ကတော့ သူတို့ မသိဘဲ ဖြစ်ခဲ့တာပါတဲ့။
သဘောကတော့ အမဲသားတွေ ဈေးကောင်းလာတော့
လူသိပ်မစားသေးတဲ့ မြင်းသားကို အစားထိုးတာပေါ့။
နောက်ပိုင်း မြင်းသားကို တရားဝင် စားလာကြမယ် ဆိုရင်တော့ နွားတွေ နဲနဲများ သက်သာသွားမလားဘဲ။
ဂျပန်မှာတော့ အရင်ကထဲက မြင်းသားကာရီ ဆိုပြီး စားကြတာနော်။
မှတ်မိသလောက်.. ဂျပန်တွေအစိမ်းစားတာ..(စားနိုင်တာ) ငါး.. နွား..နဲ့မြင်းသားပါ..။
ငါးဆာရှိမိ..ဆုရှိကတော့.. အားလုံးသိမှာဖြစ်ပေမယ့်.. နွားသားကို ပါးပါးလွှာပြီး ဆာရှိမ်ိလုပ်တာ.. သိပ်မသိကြဖူးထင်ပါတယ်..။
မြင်းသားလည်း.. ဒီလိုလုပ်စားကြပါတယ်..။ အဲဒီအသားတွေက.. သံကောင်..ဘက်တီးရီးယား ခိုကပ်ရခက်တယ်ဆိုကြာတာပါ..။
“ဘဆရှိ”တဲ့…။ အသားကရဲတွတ်နေတာမို့.. တော်တော်လှတယ်ဗျ….
(မြင်းသား)ဘနိကု က အနံ့ ပြင်းသဗျ…
အရသာတော့ အတော်ကောင်းတာကလား …
ဘာသာပျံ ဝတ္ထုတအုပ် ဖတ်ဖူးသဗျ၊ နာမည်ကျီးထဲကပဲ မေ့နေလို့…။ မင်းသားက ကျွန်အမဲ..။ ငယ်ငယ်လေးထဲက အာဖရိတိုက်ကနေ ခေါ်လာ၊ မြေရှင်တဦးထံရောင်းစား။ မြေရှင်သေတော့ သူဌေးမက ဆက်အုပ်ချုပ်၊ နောက်တော့ တော်သလင်းဇာတ်ခင်းကျပေါ့..။ အခုပို့စ်မှာ ဖွဲ့ထားတာနဲ့ဆိုင်လို့ သတိရမိတာ.. မင်းသား အရွယ်ရောက်တော့ အားကောင်းမောင်းသန် ဆိုတော့ သူတို့လို့ ကျွန်အုပ်ထဲက ဆယ့်ခြောက်နှစ် ကောင်မလေးတယောက်နဲ့ လွှတ်ပေးတယ်။ မျိုးစပ်တာပေါ့ဗျာ.. အိမ်ထောင်ချပေးတာ မဟုတ်ဘူး။ အကိုလုပ်သူက ညီမအတွက် သခင်မကို အသနားခံတယ်။ အဲဒီမှာ ကျွန်သဘောက်သား လူးပါးဝရမလားဆိုပီး မှတ်လောက်သားလောက် ကျောတရာ ရင်တရာ ကြိမ်ဒဏ်ချပစ်လိုက်တယ်။ ကျနော် ဖတ်ရင်းနဲ့ တွေးကြည့်တယ်၊ အရိုက်ခံရချိန် ဘယ်သင်း ပိုနာမလဲ၊ စိတ်ဒဏ်ရာလား ရုပ်နာကြင်မှုလား..။ ဘာသာတရား ရှုဒေါင့်က ကြည့်ရင်တော့ ကံတွေပေါ့ဗျာ… ဝတ္ထုတို တပုဒ်မှာလည်း အဲလိုပဲ သမီးနွားမဒန်းမလေးကို နွားထီးက ဝင်ခွတော့ အမေလုပ်သူ နွားအိုမဂျီး ဝင်တားတာ နွားထီးဂျို အခွေ့ခံရသေတယ်။ကိုယ်ပြုစဉ် မသိမှုကြောင့် လုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့ ခံရတဲ့အခါကြတော့ ဘာကြောင့်ဆိုတာ မသိနိုင်တော့ဘူး၊ အဲဒီမှာတင် ဘယ်သူ့ကြောင့် ဘယ်ဝှာကြောင့် ဖြစ်တာပဲ….။
တချို့များ အပျော်သဘော တိရိစ္ဆာန်အမ တိုင်ကြိုးချည်ပြီး အထီးတွေ တကောင်ပြီးတကောင် လွှတ်ပေးတာ ရှိသေးတယ်။ ကောင်းအောင်နေတော့ လွတ်သလားဆိုတော့ အချိန်တခုထိပဲ ရတယ်၊ နောက်တော့ သံသရာ ဝဲဂယက်ထဲ ပြန်မျောရတာပဲ။ ဒီဘဝ သူတော်ကောင်းဖြစ်လည်း နောင်တချိန် လူယုတ်မာ မဖြစ်မထင်နဲ့.. ကံမပြတ်သ၍ ဈန်အဘိညာဉ်ရလည်း သံသရာတကွေ့ လူနုံလူအ လူဆိုးသူခိုး ပြန်ဖြစ်လိမ့်မယ်။
ကောင်းအောင်နေတော့ လွတ်သလားဆိုတော့ အချိန်တခုထိပဲ ရတယ်၊ နောက်တော့ သံသရာ ဝဲဂယက်ထဲ ပြန်မျောရတာပဲ။ ဒီဘဝ သူတော်ကောင်းဖြစ်လည်း နောင်တချိန် လူယုတ်မာ မဖြစ်မထင်နဲ့.. ကံမပြတ်သ၍ ဈန်အဘိညာဉ်ရလည်း သံသရာတကွေ့ လူနုံလူအ လူဆိုးသူခိုး ပြန်ဖြစ်လိမ့်မယ်။
နွှား ကို နွားလို့မြင်ပါ ပြောပီး……
နွားကို လူလို ခံစားပြောနေတဲ့ ရာမညရေ……
ရွာထဲ မဆူဆူအောင် လုပ်နေတာလား….
သဂျီးကကော ပို့ စ်တွေမတက်လို့ရွာဆူအောင်လုပ်ပီး ဂဇက် ပရိုမိုးရှင်းလုပ်နေဒလား…..
ဂျာနယ်တွေသတင်းစာတွေကတောင် ပြည်သူတွေကို လမ်းလွဲအောင် အေးချမ်းအောင် ကြိုးစားလုပ်နေကြတဲ့ အချိန်မှာ………
ဂဇက်က ဆူပူအောင် လုပ်နေတာလား………
သူကြီးအကြိုက်… ကိုဘေးနွားကင်… ရန်ကုန်မှာရပြီတဲ့ဗျ…
သွားစားကြည့်မလို့ ပိုက်ဆံစုနေတယ်… ခိခိ
ဟင့်အင်း…ဖြစ်ဘူးထင်တယ်တဲ့….နွားကင်တော့ စားချင်တယ်တဲ့..ဒါပေမဲ့..allergy to ဘုန်းဘုန်းဖြစ်နေလို့တဲ့။
မြန်ကုန် မှာက ဘုန်းဘုန်းများတယ်လေ…နည်းသွားတဲ့အခါ ကျန်လာမယ်တဲ့။ :harr:
အင်း ရာမ ဇာတ်ကြည့်ချင်ပါတယ်ဆိုမှ ဂါဏ ဇာတ်ကပြနေတယ် တော်ပီ ဒီပွဲ မကြည့်ပဲ ပြန်အိပ်တာကောင်းဒယ် :harr:
ဒါနဲ့နေကြပါဦး ချစ်တယ်ဆိုတာကို အသဲနဲ့ချစ်သလား
ကျုပ်က မချစ်တတ်တော့ အသဲမရှိသလို ဦးနှောက်မရှိသလိုဖြစ်နေလို့ပါ
ဒါပေမယ့် ထန်းရည်ကိုတော့ ကြိုက်တယ်